महिलाको स्तन हेर्दा ५ वर्ष आयु बढ्ने ! - Deshko News Deshko News महिलाको स्तन हेर्दा ५ वर्ष आयु बढ्ने ! - Deshko News
महिलाको स्तन हेर्दा ५ वर्ष आयु बढ्ने !
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार जो पुरुषहरु महिलाका वक्षस्थलमा आँखा लगाउँछन् र घुरेर हेर्छन् उनीहरुमा उच्च रक्तचाप, मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम कम हुन्छ । साथै उनीहरुमा हृदयगति पनि सन्तुलित हुन्छ । यौन चाहनाले मानिसको रक्त संचार प्रकियालाई सन्तुलित बनाउने ,अनुसन्धानकर्ता डाक्टर क्यारन वेदरवीले जनाएका छन् जसको कारणले मानसको स्वास्थ्य राम्रो हुने गर्दछ ।
भ्यालेन्टाइन्स डे सबैका लागि प्रिय नहुन सक्छ, विशेषगरी सिंगलका लागि । तर भारतका अहमदाबादका सिंगलका लागि भने यो दिन विशेष हुने भएको छ । एमबीए चायवाला नामको चिसा पसलका संस्थापक प्रफुल बिलोरले भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन सबै सिंगललाई निःशुल्क चिया खुवाउने घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले फेसबुकमा एउटा पेज पनि बनाएका छन् जसको नाम राखिएको छ, Free Chai For Singles’
उक्त फेसबुक पेजमा लेखिएको छ –
‘यो भ्यालेन्टाइन्स डेमा, एमबीए चायले सबै सिंगलबारे सोचेको छ । निःशुल्क चिया, धेरै माया र प्रेरणा । आउनुहोस्, एमबीए ।’ यसबारे जानकारी दिँदै संस्थापक भन्छन्, ‘जोडीले मात्र सबै कुरामा मज्जा लिने भन्ने छ ? सिंगललाई पनि पुल्पुल्याउन आवश्यक छ । त्यसकारण यसवर्ष हामी सिंगलका लागि निःशुल्क चिया बाँड्दै छौं ।’भ्यालेन्टाइन्स डेमा बिहान सात बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म चिया बाँडिने उनले जानकारी दिए ।